Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android 7.1 dikan-GT-I9300 | Androidsis
Hafahafa ary maro ny olona mieritreritra fa ny tontolon'ny Roms dia efa an-doldrum, tsy dia izany no zava-misy satria izao dia mihoatra ny taloha noho ny fahatongavan'ny Android Nougat na Android 7, misaotra an'i Roms ho toy ny tetikasa Lineage OS na inona no tonga amin'ny fitohizan'ny Cyanogenmod, anio dia hampianariko ianao havaozina ny Samsung Galaxy S3 hiasa tanteraka Android 7.1 Nougat.
Ity fampianarana an-tanana ity izay Atoroko anao tsikelikely ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android 7.1 na Android Nougat, Izy io dia ho an'ny maodely iraisam-pirenena na fantatra amin'ny GT-I9300, eto no hahitanao ny zava-drehetra ilainao hahafahana manavao ity terminal Samsung mbola miely ity, na dia eo aza ny Samsung, dia afaka mivezivezy amin'ny alàlan'ny fanamorana ny vaovao sy farany indrindra izy ity. kinova Android.
1 Fepetra takiana amin'ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android 7.1 Nougat modely GT-I9300
2 Antontan-taratasy ilaina amin'ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android 7.1 Nougat (maodely GT-I9300).
3 Fomba fanavaozana Samsung Galaxy S3 amin'ny Android 7.1 Nougat
Fepetra takiana amin'ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android 7.1 Nougat modely GT-I9300
Azo antoka fa efa manana ny terminal anao ianao miaraka amin'ny Root sy Recovery izay novaina, raha izany dia miantsena mivantana mankany amin'ny dingana 3:
Manana ny maodely iraisam-pirenena an'ny Samsung Galaxy S3 GT-I9300
Manana ny terminal Miorim-paka ary miaraka amin'ny fanarenana voaova araka ny asehoko anao amin'ity lahatsoratra ity.
Manaova backup hidroid ny rafitra iray manontolo amin'ny alàlan'ny TWRP Recovery anao ary tahirizo amin'ny toerana azo antoka amin'ny karatra sd ivelan'ny Galaxy S3.
Fanavaozana ny TWRP Recovery amin'ny endriny farany azo alaina ao amin'ny fampiharana TWRP ofisialy na miaraka Flashify. Atoroko amin'ity rohy ity ny fomba fampidinana ny sary farany azo alaina ao amin'ny TWRP Recovery ary eto ambany dia hahita rohy hampidinana ireo fampiharana ianao.
Manaova kopia backup an'ny folder EFS avy amin'ny Recovery TWRP avy amin'ny safidy Backup, manamarina ny safidy EFS ihany.
(Tsy voatery) manaova backup amin'ny apps sy data rehetra ao amin'ny Titanium Backup satria amin'ny dingana fanavaozana dia hamafa ny zava-drehetra.
Alefaso ny safidin'ny debugging USB avy amin'ny Fikirakira ary ampidiro ny bateria ho feno.
App TWRP ofisialy
Ny fisie dia mila manavao ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android 7.1 Nougat (Modely GT-I9300).
Tsy maintsy misintona rakitra roa voafintina amin'ny endrika zip ary adikao raha tsy decompressing ao amin'ny fahatsiarovana anatiny na ivelany an'ny Samsung Galaxy S3:
Ampidino ny Samsung USB Driver
Ampidino ny tsipika-14.1-20170113-UNOFFICIAL-i9300.zip
Sintomy ny Gapps Android 7.1 Nougat ARM 32 bit
Fomba fanavaozana Samsung Galaxy S3 amin'ny Android 7.1 Nougat
Ny sarin'ny torolàlana dia tsy mifanaraka amin'ny kinova farany an'ny TWRP
Vantany vao nahavita ny dingana rehetra izay nohazavaiko tamin'ny takiana sy nisintona ireo rakitra roa ilaina, Hiverina amin'ny Mode Recovery izahay ary hanaraka ireo dingana ireo:
mamafa, mifidy izahay Mandrosoa mandroso y Manamarika ny safidy rehetra izahay, afa-tsy ny toerana nanaovanay kopia ny rakitra zip an'ny Gapps sy ny Rom. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha efa nadikanay tamin'ny fahatsiarovan-tena anatiny izany dia tsy hisafidy ny Hamafa avy amin'ny fahatsiarovan-tena anatiny isika ary raha nanao kopia azy tamin'ny SD Card ivelany dia tsy mila mifidy ity lalana ity isika. Manisy marika ny hafa rehetra izahay ary manosotra ny bara farany mba hanatanterahana ny hetsika nangatahina.
hametraka y mifantina ny Zip an'ny Rom isika ary avy eo afindra ny bara etsy ambany dia tanterahina ny hetsika.
Miverina izahay mandra-pahatongantsika ilay safidy indray hametraka y mifantina ny Zip an'ny Gapps izahay na rindranasa Google tompon-tany ilaina hiasa amin'ny Google Play Store ary afaka maka sy mametraka rindrambaiko izahay.
Izahay dia mamindra ny bara fihetsika indray ary rehefa tapitra ny fiparitahan'ny Gapps dia mifidy ny safidy izahay Hamafa dalvick sy cache izay miseho eo amin'ny ankavia ambany ankavanana eo akaikin'ny Reboot System ary eo ambonin'ny bara fitetezana.
Isika solafaka ny bara mba hanao ireo mamafa, ary rehefa vita izany dia mifidy ny safidy ny Reboot System izao.
Amin'ny famerenana voalohany, ny terminal dia haka fotoana lava kokoa noho ny ilaina mba hanombohana tanterakaAza manahy fa tena ara-dalàna izany, mety ho toy izany na dia hatramin'ny folo minitra aza satria ny rafitra fandidiana dia apetraka fotsiny. Raha vantany vao velomina tanteraka izy io, dia hamboarintsika amin'ny angon-tsika toy ny Wifi, mailaka ho an'ny kaonty Google anay ary rehefa vita izany dia avelantsika tsy hikasika na inona na inona mandritra ny folo na dimy ambin'ny folo minitra ka vita ny rafitra fiasa vaovao.
Aorian'izany dia averintsika ara-dalàna izany, izany hoe, vonoinay tanteraka izy io ary averintsika indray, ity indray mandeha ity dia ho haingana kokoa ary hahafahantsika maka sy mametraka ireo rindranasa tiantsika na ilaina.
Raha efa nanao backup tamin'ny fampiharana ianao tamin'ny Titanium Backup, ity no fotoana hametrahana ny rindranasa sy hamerenana amin'ny laoniny ny fampiharana rehetra, na dia manoro hevitra anao aza aho mba hampidina sy hametraka ny zava-drehetra avy amin'ny rangotra ho an'ny fametrahana madio tanteraka sy ny fiasan'ny terminal tsara kokoa.
Afaka manao izany ianao mankafy ny kinova Android farany amin'ny Samsung Galaxy S3 mbola manan-kery maodely iraisam-pirenena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android 7.1 dikan-GT-I9300
jessika mora dia hoy izy:
Salama namana, avy any Venezoelà aho, ny s3 gt i9300 miaraka amin'ny tsipika Movistar dia nijanona tsy nifandray tamin'ny wifi tamin'ny fotoana fohy na iray hafa, na dia ekeny aza ireo tambajotra misy, dia tsy mifandray intsony ... Mihevitra ve ianao fa azo alamina izany? Misaotra betsaka mialoha
Valio i jessika mora
SAC dia hoy izy:
Hizaha toetra izao aho amin'ny fanarahana an'ity lesona ity. Avy eo dia maneho hevitra momba ny fandehany aho.
Misaotra betsaka anao nanokana fotoana hamoronana ny paositra.
Mamaly an'i Sac
Ry namako Androidsis, nanao ny lesona aho hametrahana Nougat ho an'ny s3 i9300. Na izany aza, rehefa manomboka amin'ny voalohany Izay lazainy fa manavao, manomboka manokatra varavarankely izay milaza fa "mijanona ny fijanonana amin'ny mpamosavy" ary avy eo tsy misy na inona na inona ny telefaona dia tsy mavesatra ny rafitra ary tsy manomboka velively. Inona no azoko atao?
JESOSY SANTIAGO H. dia hoy izy:
Salama Julio, nahavita namaha azy ve ianao ary nametraka Nogaut? Toy izany koa no nanjo ahy, manana backup aho hamerenako azy any amin'i Belly Jean 4.3, fa tiako kosa ny manavao azy amin'ny kinova farany, arahaba!
Valiny tamin'i JESOSY SANTIAGO H.
Efa nanandrana aho ary tonga lafatra, misaotra.
Raha ny fanazavana, ahoana no ahafahako mamaka azy io ankehitriny?
Nanaraka ny dingana rehetra aho ary nisy zavatra nitovizany tamiko toa an'i JULIO, rehefa nanomboka aho dia nanome ahy ny hafatra hoe "mijanona hatrany ny mpamosavy configur" ary avy eo tsy nitranga izany, ny sary Android vaovao ihany no vitako tamin'ny voalohany. , nanao ahoana ianao?
Ines dia hoy izy:
raha manavao ny samsung galaxy S3 amin'ny 7.1.1 aho ve very radio? Nanavao azy aho ary ny radio an'ity telefaona ity izay tsy mila internet, tsy hitako
Mamaly an'i Ines
Antonio Jesus Lopez vergara dia hoy izy:
Salama. Ary aorian'izany, ahoana no ahafahanao mametraka ny google play sy ny fametrahana azy?
Valiny tamin'i Antonio Jesús Lopez vergara
Zulia Street dia hoy izy:
Miarahaba, ahoana no ahafantarako raha ny Gt-i9300 no kinova iraisampirenena?
Valiny amin'i CalleZulia
Sony dia nanala ny fanavaozana Nougat avy amin'ny Xperia Z5, Z3 + ary Z4 Tablet
Ahoana ny fomba hamoronana Instagram Stories, ny asan'ny kintana Instagram